Neymar Jr Waxaa Qasab Ku Ah In Uu Ku Soo Laabto Barcelona Si Uu Uga Garab Ciyaaro Messi, Suarez & Griezann. - Gool24.Net
Ra’isal wasaarihii hore ee dalka Faransiiska ee Manuel Valls isla markaana hadda ka tirsan boodhka kooxda Barcelona ayaa sheegay in Neymar Jr ay waajib ku tahay in uu dib ugu soo laabto kooxdii uu sida xun kaga baxay si uu uga garab ciyaaro Messi, Suarez iyo Griezmann.
Ra’isal wasaarihii hore ee France ee Mauel Valls oo si khaas ah taageere ugu soo ahaa kooxda Barcelona ayaa sheegay in ay Neymar Jr uu ku fashilmay Paris si uu ugu ciyaaro heerkii ugu sareeyay ee uu Barca ku soo gaadhay, sidaa daraadeedna ay waajib ku tahay in uu soo laabto.
Manuel Valls oo Neymar Jr soo laabashadiisa Barcelona ka hadlaya ayaa yidhi: “Waxa uu Neymar qaladka ku sameeyay ee heerka shaqsi ahaaneed iyo heerka ciyaaraha ee Paris waxay la micno tahay in aanu halkaas waqti ka badan sii joogi karin”.
Manuel Valls oo waxa hadda qasabka ku ah Neymar ka hadlaya ayaa yidhi: “Isaga waxaa waajib ku ah in uu hal koox oo kaliya ku soo laabto taas oo ah mida isaga ka caawin karta in uu qaab ciyaareedka ugu fiican kaga garab ciyaaro Messi, Griezmann iyo Saurez”
“Wax cajiib ah ayay noqon kartaa in aad afartaas wada jir ugu haysto Barcelona. Laakiin waxay ku xidhan tahay maaliyada kooxda iyo waxyaabahaas. Ka taageere Barcelona ah, waxaa jecelahay in uu isagu soo laabto ” ayuu Manuel Valls hadalkiisa sii raaciyay.
Neymar Jr ayaan wali helin fursadii uu doonayay in uu Barcelona ugu soo laabto laakiin waxa uu maamulka kooxdiisa PSG ku cadaadinayaa in ay aqbalaan dalabyada uu ka helayo kooxda Barca.